Relive The Beatles' Album '1' Ine Spatial Audio paApple Music | Nhau dze iPhone
Relive The Beatles' '1' Album Ine Spatial Audio paApple Music
Spatial odhiyo yakaunzwa mwedzi mishoma yapfuura muApple Music uye kubva ipapo haina kurega kuwana mukurumbira pakati pevanyoreri vako. Izvi zvakasimbiswa nemutevedzeri wemutungamiri weSilver Schusser sevhisi mune imwe yekubvunzurudza kwake kwekupedzisira. Muchokwadi, mumwedzi ichangopfuura tiri kuona kuti anozivikanwa sei uye ane mukurumbira maalbum ari kudzokororwa kuti ape iyi spatial odhiyo chiitiko. Iyo yazvino update inobva Giles Martin, mugadziri anozivikanwa wemimhanzi, ndiani akadzokorora album 1 yeinonyanyo zivikanwa The Beatles iyo yave kuwanikwa yekuteerera paApple Music.
Spatial Audio Kuuya kuThe Beatles' '1' Album paApple Music
1 Ndiyo imwe yeanonyanya kuzivikanwa maalbum neThe Beatles. Muchokwadi, yaive album yakatengeswa zvakanyanya ye2000-2009 makore gumi uye imwe yeThe Beatles 'madhaimani marekodhi matanhatu. Muunganidzwa we 27 dzenziyo dzeBeatles dzaive nhamba yekutanga pamachati akanakisa muUS neUK. Mugadziri weiyi albhamu aive George Martin, baba vaGiles Martin, mugadziri anga achitungamira kuidzokorora kuApple Music.
Vanopfuura hafu yevanyoreri veApple Music vanoshandisa spatial odhiyo
Giles Martin mugadziri wemimhanzi akamborumbidza spatial audio tekinoroji uye Dolby Atmos. Pamusoro pezvo, akange avimbisa zvinangwa zvekudzokorora iyo album '.Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' neThe Beatles. Zvisinei, 1 Yakanga iri yekutanga album yakasarudzwa naMartin kuti atange kusvetuka kubva mumhanzi weBeatles kuenda kuApple Music's spatial audio.
Tinogona kutonakidzwa iyi album mune spatial audio. Uye zvakare, tsananguro yealbum muApple Music yatotizivisa nezve shanduko:
The Beatles '1 yakatanga kusunungurwa muna 2000 uye yakakurumidza kuva album yakatengeswa kudarika nguva dzose. Inosanganisira makumi maviri nenomwe enziyo huru dzebhendi, dzose dzakasvika Nha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Relive The Beatles' '1' Album Ine Spatial Audio paApple Music
Peek Performance. Apple inosimbisa chiitiko chaKurume 8.
CarPuride: wedzera CarPlay kumota yako mumaminitsi maviri chete (kunyangwe isina waya)